+ 15 Nalalka guluubka nalka, fikradaha iyo naqshadaha uruurinta | Tattoo
Tattoo guluubka nalka, ururinta naqshadaha iyo fikradaha
ka tattoos guluubka nalka Waxay ku habboon yihiin dadka hal-abuurka leh ee ay tahay inay maankooda geliyaan imtixaanka maalin kasta markay raadinayaan xalka caqabadaha iyo / ama dhibaatooyinka kala duwan. Yaab iyo yaab leh, waa sida ay yihiin nooca tattoos in muddooyinkii u dambeeyay caan ku sii ahaanayay oo ay aad iyo aad u tiro badani dadku doorbidayaan inay maqaarkooda ku calaamadeeyaan guluub iftiinkiisu sii badan yahay ama ka yar yahay.
Laakiin iyagu uma adeegaan inay metelaan hal-abuurka qofka. Tattoo guluubka nalka sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu yeesho macno qoto dheer qaraabo dhintay oo waligiis iftiin inoo noqon doona, saaxiib nagu hagta daqiiqadaha ugu mugdiga badan ama figrad aan ugu dheganaano si aan u gaarno himilooyinkeena.
1 Muxuu ka dhigan yahay tattooska guluubka nalka?
2 Naqshadaha nalka naqshadaha nalka ayaa aad u kala duwan oo midabbo badan
3 Sawirrada Tattoos Nalka Nalka
Muxuu ka dhigan yahay tattooska guluubka nalka?
Sidoo kale ma iloobi karno in sawirka guluubka nalka uu caadi ahaan la xiriiro dadka hal abuurka badan ama khayaaliga ah ee u heellan fulinta howlaha ama mashaariicda meesha male-awaalka, hal-abuurnimada iyo firfircoonidu ay yihiin amarka maalinta ee ay tahay inay ku raadiyaan fikraddaas., Ama halkii, samee iftiin nalkaas si loo xaliyo dhibaatooyinka loo soo bandhigo maalin kasta.
Tattoo guluubka nalka ayaa la kacay fikradda ah in la matalo wixii horay looga hadlay ee kor ku xusan laakiin taasi, hadda, Waxay qaateen macno intaa le’eg iyo magac sidaas u weyn oo aan xad dhaaf ahayn (Sida Tattoo ama baadad) in ay tahay wax aan macquul aheyn in aan u qalano iyaga oo leh hal macne laakiin waan isku dayi karnaa.
Micno aad u caan ah oo badanaa la siiyo tattoos guluubka nalka ayaa ah tan Xoogga saar, taas oo ah, waxay u taagan tahay u fiirsashada fikrad, hadaf ama caqabad dhinaca qofka hogaamiya inay had iyo jeer maskaxda ku hayso. Waxay la mid tahay dhiirigelin kugu dhiirrigelinaysa inaad sii socoto iyadoo ay jiraan dhibaatooyinka kaa hortaagan, taas oo, marar badan, aysan sahlaneyn in laga gudbo oo u baahan "taabashada iftiinka" ama hal-abuurnimo si aan horay ugu socono. Tattoo guluubka nalka ayaa inta badan, in kastoo aan badnayn, lala xiriirinayo sababayn dambe ama fikrado caan ah bannaanka sanduuqa kuwaas oo ah hal abuurnimo ama fikrado asal ah oo lagu xaliyo dhibaatada.
Micno kale oo aad u baahsan oo nooca noocan oo kale ah ayaa ah u heellan ama ku faanista wax (shaqo, fikrad, farsamo) ama qof tan iyo markii uu ku jiro guluubka, waxaa jira nashqado aad ku arkeyso qof ama shay matalaya sharaf ama qanacsanaanta qofka xiran Tattooga.
Ama xitaa adiga kuu gaar ah dabeecadda ayaa ka muuqda tattoos guluubka nalka, Fikradan ugu dambeysa waa wax yar oo faahfaahsan laakiin farshaxanada tattoo-ga ah waxaan baarnay oo waxaa jira dhowr naqshadood oo isku dhafan labadan fikradood oo, sida muuqata, aan waxba ka dhexeyn laakiin in farshaxanka wanaagsan ee tattoo uu isku dari karo qurux aad u qurux badan, xiiso leh oo gaar ah gabal
Kuwani waa qaar ka mid ah macnayaasha inta badan loo bixiyo noocyada tattoosyada, waxaa iska cad in, mid kastaaba, uu siinayo taabashadooda shaqsiyeed si ay ugu metelaan wax naftooda ama adduunkaba.
Qodobkaan waxaan ku sameynay mid dhameystiran oo kaladuwan ururinta guluubka nalka taasi waxay kuu oggolaaneysaa inaad fikrado u qaadato tattoo-gaaga haddii ay dhacdo inaad tixgelinayso suurtagalnimadaas. Runtu waxay tahay in ka baxsan rabitaanka inay muujiso shakhsiyaddeena hal-abuurka ah, tattoos guluubka nalka ayaa sidoo kale lagu dari karaa waxyaabo kale si loo beddelo macnahooda ama loo gudbiyo farriin gaar ah.
Kaliya fiiri ka nalka sawirka guluubka nalka si aad u hesho naqshado aad u kala duwan oo kala duwan. Waxaan arki karnaa inay jiraan naqshado aad u macquul ah oo faahfaahsan oo loogu talagalay ta ugu baahida badan halka aad ka arki karto xitaa leexashada oo fiiladu ku bixiso gudaha guluubka, xitaa naqshadaha aan ku aragno dadka (ha ahaato qaab silhouette ama jirka oo dhan) leh kakanaanta taasi waxay ku lug leedahay ilaa fudeydka nooca guluubka emoticon sida kuwa aan ku haysano taleefanka gacanta. Waxa jira nashqado madow sida dhakada oo leh guluub ka soo baxaysa dhakada ama isha iyo kuwo kale halkaasoo aan ka helayno isha guluubka gudihiisa.
Naqshadaha nalka naqshadaha nalka ayaa aad u kala duwan oo midabbo badan
Sidaan horay u sheegay mid waliba wuxuu bixiyaa macnaha ugu dhow fikirkooda waxayna noqon karaan kuwa kala duwan sida barafka barafka ku dhaca barafka, kaliya waa inaad heshaa naqshada aad jeceshahay ama aad ugu matasho.
Laakiin marka la sawirayo sawirka aad ayaan u caawineynaa kuwa kale sidaa darteed waxaan abuurnay sawir gacmeedyo si aad u hesho waxoogaa dhiirigelin ah oo aad awood ugu yeelatid inaad maqaarkaaga ku calaamadeysid naqshaddaas gaarka ah ee adiga kuu gaarka ah.
Waa maxay sababta loo sawiro guluubka nalka qof gudaha ku jira? Dhinacaan, fikradda gudbinta farriinta in qof gaar ahi u taagan yahay iftiinka dhexdeenna ayaa lagu ciyaarayaa. Ha ahaado xubin qoyska ka mid ah, lammaane ama saaxiib. Adigana, maxaad u maleyneysaa kuwan xaraashka? Waxaan jeclaan lahayn inaan ku ogaanno aragtidaada iyada oo loo marayo faallooyinka maqaalkan.
Sawirrada Tattoos Nalka Nalka
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Waxyaabaha iyo waxyaabaha loo yaqaan 'tattoos' » Tattoo guluubka nalka, ururinta naqshadaha iyo fikradaha
Tattoo faashka, ururinta naqshadaha iyo tusaalooyinka
Malaa'igta iyo jinniyo tattoos